छोरीलाई स्वस्थानी सुनाऔं- विचार - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन २, २०७५ साधना प्रतीक्षा
काठमाडौँ — साथीकामा गएकी थिएँ । उनकी दसवर्षे छोरीले स्कुलबाट आएर हस्याङ–फस्याङ गर्दै भनी, ‘आज म्यामले हामीलाई स्वस्थानीको कथा सुनाएको नि !’ मैले सोधेँ, ‘के थियो त नानु त्यसमा ?’ हौसिएर उसले भनी, ‘मभन्दा सानी सात वर्षकी केटीको बिहे भएको ! बालविवाह रे क्या । त्यो दुलाहा भने बूढो मान्छे । कस्तो अचम्म ! पहिलाको समयमा त्यस्तो हुन्थ्यो रे ।’ ‘अरु के–के रहेछ त स्वस्थानीको कथामा ?’ मेरो अर्को प्रश्न थियो ।
‘राक्षसहरूले सधैं अरूलाई दु:ख दिने र नराम्रो काम गर्दारहेछन् । भगवानले कस्तो कस्तो रूप लिएर उनीहरूलाई मारेको । अर्कालाई दु:ख दिनु पाप हो रे । पापीलाई भगवानले सजाय दिएको रे । म त कहिल्यै पाप गर्दिन र भाइलाई पनि अरुलाई दु:ख नदेऊ भनेर सिकाउँछु । हाम्रो म्यामले भनेको,’ उसले भनी ।
बच्ची आफ्नो बालसुलभ भनाइ राखेर गृहकार्य गर्न थाली । उसकी शिक्षिका स्वस्थानीको सानो कथा प्रसङ्गबाट बालबालिकालाई सामाजिक तथा नैतिक दुवै शिक्षा दिन सफल भइन् । मनमनै साधुवाद दिएँ, उनलाई ।
स्वस्थानीको कथा सुन्न उत्सुक मेरी छोरीलाई मैले त्यहाँ वर्णित मत्र्यलोकको कथा सुनाउन उपयुक्त ठानेँ । बाँकी देवलोकका प्रसङ्ग उसले हिन्दी धारावाहिकमा हेरिसकेकी थिइ ।
गोमाको जन्मको कथा सुन्दा चकित भएकी ऊ गोमाको बिहेको प्रसङ्गमा आक्रोशित बन्न थाली । ‘सात वर्षकी बालिकाको बिहे गरिदिने त्यो पनि सत्तरी वर्षको बूढोसित ? अझ कस्तो कुरूप † त्यही भएर पो सोह्र वर्षदेखि बिहे गर्न खोज्दा पनि केटी नपाएको रहेछ † त्यो त अन्याय हो । छोरी भन्दैमा जे पायो, त्यही गर्न पाइन्छ ? कसैले मर्छु भनेर घुर्की लाउँदैमा छोरी दिइहाल्ने ? गोमा पनि कस्ती ? जे गरे पनि सहेर बस्ने,’ छोरीको प्रतिक्रिया थियो ।
मेरी तेह्रवर्षे छोरीलाई मैले स्वस्थानीको बाँकी कथा होइन, त्यतिबेलाको सामाजिक परम्परा, त्यसभित्र छोरीहरू दबिएर बस्नुपर्ने कारणबारे बताउन थालेँ । सात वर्षमा बिहे गरेर बुहार्तन झेलेकी मेरै आमाको कथा सुनाएँ । केही समयअघि १२ वर्षमा आमा बनेकी चेपाङ किशोरीको कुरा सुनाएँ । हरिमाया भेटवालको ‘कल्ली’ उपन्यासकी कल्लीको बालविवाहको पृष्ठभूमि र उसको बुहार्तनको कथा सुनाएँ । छोरी झनै चकित भएर भन्न थाली, ‘गाउँघरतिर अझै यस्तो छ ? यस्ता कुराको विरोध गर्नुपर्छ । लैंगिक विभेद पनि अपराध हो ।’
अधिकांशले स्वस्थानी कथाको आलोचना गर्ने विषय यही हो । त्यहाँ नारी जातिलाई निरीह, दासी तथा वस्तुरूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । देवताका अन्य प्रसङ्गका आधारमा पनि विगतमा धेरै आलोचना गरिए । स्वस्थानी व्रत आरम्भ भएदेखि नै पत्रपत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालमा यसको आलोचना हुन्थ्यो ।
तर पुस–माघको जाडोमा साली नदी स्नान गरी व्रत बस्ने महिलाको संख्यामा कमी आएन । सायद हिन्दु महिलाको यही आस्थाका कारण कसैले इशाई धर्म प्रचारका लागि स्वस्थानीको कथामा ईशुको कथा घुसाइदिएको प्रसङ्ग पनि चल्यो । यस्तै आस्था र आलोचनाबीच हरेक वर्ष स्वस्थानी महात्मे सम्पन्न हुने गर्छ । आस्था र आलोचनाको बीचमा यसको सामाजिक पक्ष ओझेलमा परेको देखिन्छ ।
समाज विकासको इतिहास हेर्दा आदिम युग अर्थात् जङ्गली अवस्थाका मानिस हिंस्रक थिए । मानिसको क्रूरता दमन गरी उसमा दया, माया, करुणा जगाउन सर्वोच्च शक्तिका रूपमा धार्मिक आस्थाको प्रादुर्भाव भएको मानिन्छ । राज्य र कानुनको आरम्भ भइनसकेको अवस्थामा मानिसमाथि नियन्त्रण राख्न धर्मको अवधारणा आएको हो ।
समाजशास्त्री धर्मलाई राज्यभन्दा जेठो सामाजिक संस्था मान्छन् । यही धार्मिक आस्थाले परिवार तथा समाजलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्न विभिन्न मूल्य–मान्यता निर्माण गर्दै गयो । समाज विकासको क्रममा महिला वर्ग जैविकीय गुणका कारण घरपरिवारमा सीमित हुनुपर्‍यो । उक्त मूल्य–मान्यताका निर्माणकर्ता पुरुष बन्न गए । उनीहरूले आफू अनुकूल निर्माण गरेका हुनाले यस्ता धार्मिक–सांस्कृतिक मूल्य पुरुषप्रधान देखिन्छन् ।
स्वस्थानीको कथामा पनि केन्द्रमा पुरुष रहेको तथा नारीको अवस्था सिमान्तीकृत हुनुलाई नौलो मानिँदैन । जहाँ उत्पीडन हुन्छ, विद्रोहको आरम्भ त्यहीँबाट हुने गर्छ । समाजमा युगौंदखि स्थापित पुरुषप्रधान संस्कृतिबाट महिला वर्गले खेप्नुपर्ने उत्पीडनका कथा यसरी बाहिर नआएको भए आज हामीमा विद्रोहको आवश्यकताबोध हुने थिएन ।
स्वस्थानीका गोमा, चन्द्रावती, सती–पार्वती आदिका कथा छोरीहरूलाई सुनाउनुपर्छ, ताकि उनीहरूमा समाज विकासको ऐतिहासिक अवस्थाको जानकारी होस् र नारी उत्पीडन विरुद्ध मुक्तिको चाहना पनि प्रबल बन्दै जाओस् ।
धर्म–कर्म, व्रत–पूजामा महिलाकै सहभागिता किन ? पाप पखाल्ने दायित्व महिलाको मात्र हो ? पुरुषले जे गरे पनि ऊ पापी किन नहुने ?
महिलाले कठोर अनुष्ठान गरेर परिवारका पुरुषको वरत्र र परत्र सुधारिदिनुपर्छ भन्ने के छ र ? यस्ता नारीवादी प्रश्न पनि आफ्नो ठाउँमा सही होलान् । तर धर्म–कर्म, व्रत–अनुष्ठानको अभिप्राय: पाप पखाल्नु हो भन्ने गलत मानसिकताबाट मुक्त हुनु पनि आजको आवश्यकता हो । नारीवादकै कुरा गर्ने हो भने पनि अबको नारीवादले समानताको मात्र नभएर अग्रताको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । पुरुषले गर्न नसक्ने काम महिलाले गर्छन् ।
नारीवादलाई पश्चिमको देन भनिए पनि पूर्वीय सनातन परम्परामा आदिकालदेखि नारीवादी मूल्यको विम्बन देखिन्छ, त्यो पनि समानताको भन्दा अग्रताको । शिव र शक्ति अर्थात् पार्वतीको महाकाली स्वरूप यसको उदाहरण हो । स्वस्थानी देवी भनेकी पनि शिव–पार्वतीकै रूप मानिएको हुँदा यस व्रतकथाको मूलमर्म शिवशक्तिकै प्रसङ्ग हुनुपर्छ । शिव र सतीको कथा दाम्पत्य प्रेम र त्यागको अनुपम नमुना हो ।
उनीहरूको विवाहको प्रसङ्गलाई अपत्यारिलो ढङ्गले प्रस्तुत गरिए पनि उनीहरू एकअर्काका पूरक हुनाले पिताको इच्छा विपरीत बिहे भयो । पतिको अपमान सहन नसकेर सतीले आत्महत्या गरिन् भने शिवले पत्नी वियोगमा पागल बनेर उनको शव बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरिरहे । वर्तमानमा यसरी पत्नीलाई प्रेम गर्ने पति सायदै पाइएलान् ।
अहिले अनेक नामकरण गरी हप्तादिनसम्म मनाइने आयातित प्रेम दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन्स डेको संस्कृतिभन्दा शिव–सतीको समानता, सहअस्तित्व र त्यागको प्रेमकथा अनुकरणीय उदाहरण बन्न सक्छ । तर स्वस्थानी पढ्नेहरूले पत्नी प्रेमको यो प्रसङ्ग उठाएको देखिँदैन ।
यस कथाका अन्य कतिपय प्रसङ्गमा शृङ्गारिकताको अत्यधिक प्रस्तुतिका कारण अश्लीलता पनि देखिन्छ, जुन परिवारसामु बसेर भन्दा र सुन्दा असहज लाग्छ । यसमा परिमार्जन आवश्यक देखिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा मनोरञ्जनको साधनका रूपमा यस्तै कथा प्रसङ्गलाई लिइने हुनाले पनि यस्तो प्रस्तुति भएको हुनसक्छ ।
मनोरञ्जनलाई स्वस्थ र अस्वस्थ गरी दुई रूपमा हेर्न सकिन्छ । पूजा–अनुष्ठानमा स्वस्थ मनोरञ्जन हुने गर्छ । युगौंदेखिको पुरुषप्रधान समाजमा महिला घर–व्यवहारको बोझले थिचिएर हैरान भएको अवस्थामा यस्ता अनुष्ठान उनीहरूका लागि केही समय भए पनि उन्मुक्ति र मनोरञ्जनका माध्यम बने होलान् ।
व्रत बस्ने महिलालाई मिठो–चोखो खान दिने, सम्मान गर्ने गरिन्थ्यो होला । उनीहरूले केही समय सामूहिक रूपमा भजन–कीर्तन, नाचगान गरेर ईश्वर भक्तिका माध्यमबाट आध्यात्मिक आनन्द प्राप्त गर्थे होलान् । मौका पाए आपसमा पीरव्यथा साटेर बोझ हलुको पार्दा हुन् । अझै गाउँघरतिर महिला यस्तै अनुष्ठानबाट मनोरञ्जन गर्छन् ।
त्यसैले यसको विरोध होइन, संशोधनसहित निरन्तरता हुनुपर्छ । स्वस्थानीका जस्ता कथा एउटा कालखण्डको समाजको चित्र हो । तत्कालीन अवस्थाको सामाजिक सम्बन्ध, अन्तरक्रिया र सामाजिक आस्थालाई यसले उजागर गरेको छ । यसलाई तत्कालीन नजरले हेरिनुपर्छ । त्यहाँ भित्रको नारी उत्पीडनलाई एक्काइसौं शताब्दीको चस्माले हेरेर आलोचना गर्नुभन्दा त्यही पीडा बोधद्वारा नयाँ पुस्तालाई चेतनशील बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
मलाई सम्झना छ, म सानाी छँदा गोमाको पीडा र विभेदकारी मान्यताप्रति मनमनै रिस उठ्थ्यो । तर मेरी छोरीजस्तै आक्रोशित हुन भने डराउँथेँ । कलेज पढ्ने भएपछि वधुशिक्षाको उपदेश, सहनशिला सुशीला र इन्दिराको उत्पीडनले आक्रोशित हुनथालेँ ।
साहित्यका माध्यमबाट जति–जति समाजको चित्र र महिलाको अवस्था बुझ्दै गएँ, ममा विद्रोह र परिवर्तनकारी भाव जागृत हुँदै गयो, पहिचनाको खोजी प्रबल बन्दै गयो । स्वस्थानीको कथा पनि एउटा साहित्य हो । यसले धार्मिक–पौराणिक मिथकहरूका माध्यमद्वारा समाज दर्शन गराइरहेको छ । मिथकहरू अपव्याख्या हुने, कर्मकाण्डीय पद्धतिको आरम्भपश्चात् लैङ्गिक विभेदले बढावा पाउने आदिका कारण पौराणिक–धार्मिक कथाहरू अलोकप्रिय बन्दै गएका देखिन्छन् ।
यस्ता कथाहरूमा देखिएका विरोधाभाष, अत्यधिक शृङ्गारिकता तथा पूर्वाग्रहका प्रसङ्गमा परिमार्जन गरी यिनीहरूलाई प्रसारमा ल्याइनुपर्छ । यसले नयाँ पुस्तामा आध्यात्मिक आस्था, नैतिक शिक्षा तथा उत्पीडन विरुद्ध चेतना जागृत गराउन सक्छ । प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७५ ०७:५०
योग्य तथा इमानदारलाई पनि कुनै दल विशेषको लेबल नलगाएसम्म जिम्मेवारी नदिने गलत संस्कृति बनेको छ । अयोग्यहरू दल विशेषको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेर योग्य बन्दै सम्हाल्नै नसक्ने जिम्मेवारीमा पुगेको देखिन्छ । यसले संस्थागत हित गर्न सक्दैन । प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व चयन गरेर त्यसभित्र रहेका ‘काम गर्न नदिने तत्त्व’को पहिचान गरी त्यसलाई निष्क्रिय गर्दै साझालाई नब्युँताउने हो भने आगामी पुस्तालाई ‘साझा प्रकाशन भन्ने संस्था पनि थियो’ भन्दै त्यसको इतिहास पढाउनुपर्ने नियति भोग्नु पर्नेछ ।
प्रकाशित : माघ १२, २०७५ ०८:२७